दालचिनीलाई यसरी प्रयोग गर्नुहोस्… छालाको दाग, खत र डण्डीफोर हटाउन मन छ ? – Complete Nepali News Portal
दालचिनीलाई यसरी प्रयोग गर्नुहोस्… छालाको दाग, खत र डण्डीफोर हटाउन मन छ ?
March 14, 2017	7,924 Views
काठमाडौं । अनुहार आकर्षक देखाउने रहर जोकोहिलाई पनि हुन्छ । आफ्नो मुहार सुकोमल पार्नका लागि विशेषगरि महिलाहरु अनेकौ प्रकारका कस्मेटिक उत्पादनको सहायता लिने गर्छन् । हुनत छाला सुकोमल तथा आकर्षशक बनाउने भन्दै अनेकौ प्रकारका उत्पादनहरु बजारमा उपलब्ध छ । तर यी उत्पानहरु महंगो हुनाका साथै कतिपय अवस्थामा छालालाई कुरुप समेत पार्न सक्ने हुन्छ ।
तसर्थ आज हामी अनुहार सुकोमल पार्न र छालामा भएका दाग, डण्डिफोरबाट छुटकारा पाउन सकिने घरेलु उपायका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं । कतिपय अवस्थामा छालाको स्वरुप बिग्रिनबाट छुटकारा पाइयो भनेर ढुक्क भएता पनि छालामा दाग तथा खत भने बाँकीनै रहन्छ । अनि एउटा प्रख्यत भनाइ छ, यदि कुनै कुरा मुखमा हाल्न सकिन्न भने त्यसलाई अनुहारमा पनि दल्नु हुँदैन ।
आज हामीले जानकारी गराउन लागेको यो घरेलु छाला लेपले पनि यो पुरानो भनाईलाई चरितार्थ गरेको छ । दालचिनी छालाको संपर्कमा आएपछि यसले अनौठो तथा हल्का श्रृङ्ग पार्ने खालको उत्तेजना श्रृजना गर्छ जुन केही क्षणमै हराएर जान्छ । दालचिनीमा फंगल तथा जिवाणु बिरुद्ध लड्न सक्ने गुण लुकेको हुन्छ । यसमा छालालाई हानि पुर्याउन सक्ने अन्य विषादी बिरुद्ध लड्नसक्ने क्षमता पनि लुकेको हुन्छ । दालचिनीलाई यसरी प्रयोग गनुंस्
१) आधा चम्चा दालचिनीको धुलो २) आधा चम्चा जाईफलको धुलो ३) एक चम्चा मह ४) एक चम्चा ताजा कागतीको रस